AutoKey: Aalad qalab otomaatig ah oo waxtar u leh GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
AutoKey: Aalad qalab otomaatig ah oo waxtar u leh GNU / Linux
Marka ay timaado automate hawlaha (waxqabadyada ama ficillada) kombiyuutarka, tani had iyo jeer waxay leedahay ujeedka kordhinta faylka wax soo saar ee isticmaalayaasha. Markay isticmaaleyaashani sida caadiga ah horumarsan yihiin, sida kiiska Maamulayaasha Adeegga, Soosaarayaasha ama DevOps iyo kuwo kale oo la xiriira, maadaama codsiyada wax -soo -saarka inta badan la isticmaalo. Sida barnaamijyada noocee ah Ulauncher o Hawlaha Automators noocee ah "AutoKey".
Iyo kiiska "AutoKey", waxaa xusid mudan in tani ay tahay a app desktop desktop furan kaas oo ka caawiya si otomaatig ah hawlo badan oo soo noqnoqda si otomaatig ah.
Ulauncher iyo Synapse: 2 Launchers Best Application oo loogu talagalay Linux
Iyo ka hor inta aan la sifeyn "AutoKey" oo sahamin sida rakib oo isticmaal, sida caadiga ah isla markiiba waxaan ka tagi doonnaa hoosta, xiriirada qaar la xiriira qoraallo hore oo la xiriira oo kale barnaamijyada wax -soo -saarka in aan hore wax uga qabannay, si marka dhammaadka daabacaadan si sahlan loogu sahmiyo:
"Soo -saareyaasha dalabka (soo -saareyaasha) waa aalado ama dhammaystir aan inta badan ku fulinno Nidaamyadeenna Hawl -gelinta si aan u horumarinno wax -soo -saarkeenna, annagoo kordhinayna fududeynta iyo xawaaraha adeegsiga furaha si loo fuliyo falalka. Ficilka sida caadiga ah aad u faa'iido badan gaar ahaan, marka halkii aan ka ahayn Degaanka Desktop (DEs) aan isticmaalno Maareeyaha Daaqadda (WMs). Oo ka mid ah kuwa ugu fiican waxaan ka xusi karnaa Ulauncher, oo ah barnaamij si dhakhso leh u bilaabaya Linux. Waxaa lagu qoray Python, iyadoo la adeegsanayo GTK +." Ulauncher iyo Synapse: 2 Launchers Best Application oo loogu talagalay Linux
Dmenu iyo Rofi: 2 Barnaamijyo Wanaagsan oo WMs ah
Albert iyo Kupfer: 2 jaangooyooyin aad u fiican oo lagu beddelan karo Cerebro
Maskaxda: Barnaamij furan oo iskutallaab ah oo loogu talagalay wax soo saar
1 Autokey: App Automation Desktop -ka Linux
1.1 Waa maxay AutoKey?
1.3 Waa maxay sababta AutoKey u tahay barnaamij wanaagsan SysAdmins?
1.4 Rakibaadda iyo isticmaalka
1.5 Sawirada shaashada
1.6 Macluumaad dheeraad ah
Autokey: App Automation Desktop -ka Linux
Waa maxay AutoKey?
Sida laga soo xigtay Bogga rasmiga ah ee "AutoKey" ee GitHub, appkan ayaa si kooban loogu sharxay sida soo socota:
"Waa adeeg otomaatig desktop ah Linux iyo X11."
Waxay sidoo kale ku darayaan in:
"Waxay hadda ka hoos shaqaysaa Python 3. Iyo maadaama ay tahay codsi X11, kama shaqayn doonto 100% qaybinta GNU / Linux ee u adeegsata Wayland si caadi ah halkii ay ka ahaan lahayd Xorg."
Waxay bixisaa adeegsi garaafyo fudud oo dareen leh oo adeegsada qoraallada Python-3 oo fuliya ballaarinta qoraalka, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo shaqaynta macro iyo furaha.
Waxaa loo adeegsan karaa ballaarinta qoraalka fudud labadaba iyadoo la adeegsanayo "Weedho". Marka laga jawaabayo furayaasha gaagaaban (tusaale [Ctrl] + [Alt] + F8), si loo ballaariyo weedhaha.
Waxay u oggolaaneysaa, haddii loo baahdo, in la isticmaalo dhammaan awoodda luqadda barnaamijka Python si loogu qoro Qoraallada Python3 si loo shaqaysiiyo howlaha lagama maarmaanka ah. Qoraallada AutoKey sida jumladaha waxaa lala xiriirin karaa soo gaabin iyo furayaasha kulul, iyo waxyaabo kale, si loo fuliyo amarrada.
Waxay siisaa API isdhexgalka nidaamka, sameynta waxyaabo sida gujinta jiirka ama ku qoridda qoraalka furaha.
Waa maxay sababta AutoKey u tahay barnaamij wanaagsan SysAdmins?
Labaduba wanaagsan Sysadmins Sida xirfadleyda IT -ga kale ee horumarsan, badiyaa waxay leeyihiin faham aasaasi ah barnaamijka ama macquulka barnaamijka. Sidaa darteed, waxyaabo badan, waxay u muuqdaan inay si aad ah u fahmaan hawlgalka / dhaqanka qalabka / aaladaha kala duwan iyo softiweerka la xiriira, si loo hirgeliyo loona xaliyo dhibaatooyinka.
Laakiin sidoo kale, waxay badanaa ku fiican yihiin noocyo kala duwan luqadaha barnaamijyada loo isticmaalo qorista ama otomaatiga hawlaha caadiga ah sida Shell, AWK, Perl, Python, iyo kuwo kale. Dhammaan si aad otomaatig ugu samayso intii suurtogal ah, oo aad u maareyso sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah qorista luqadaha iyo amarrada, si loogu beddelo hawlo soo noqnoqda oo daal badan hawlo otomaatig ah.
Rakibaadda iyo isticmaalka
Si aad u soo dejiso, waxaad kala soo bixi kartaa faylka 3 faylasha qaabka .deb lagama maarmaan ah oo laga heli karo qaybta soo -dejinta, oo u dhiganta tii ugu dambeysay nooca hadda (0.96 beta-8), ka dibna ku rakib qalabkaaga GNU / Linux Distro, sida kiiskeena wax ku oolka ah. Si kastaba ha noqotee, labadaba (baakadaha gtk iyo qt) ama kaliya 1 ka mid ah labada ayaa lagu rakibi karaa sidii loo baahdo.
Ka dib markii la soo dejiyey faylka Soo dejiso faylka, waxyaabaha soo socda ayaa lagu fulin karaa terminal amar amar:
Ka dibna ku orod Liiska Codsiyada iyo jadwalka a weedh ama qoraal isticmaalaya Luqadda Python. Xaaladayda, jadwalka hawsha soo socota: Orod ciyaarta Argagixisada Magaalada 4 furayaasha leh Ctrl + 4. Ficil markii hore gacanta lagu qabtay iyadoo la furayo biraawsar, la raadinaayo faylka isha iyo gujinta faylka la fulin karo.
Python code programme
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan "AutoKey" Waxaan kugula talineynaa sahaminta 3da xiriiriye ee soo socda:
Caawimo onlayn ah: AutoKey
Xeerka Google: AutoKey
Soo koobid, sida la arkay "AutoKey" waa mid aad waxtar u leh qalab otomaatig hawleed, kaas oo sidoo kale ku shaqeeya adeegsiga Afka Python. Si fiicanna loo adeegsado, waxay noqon kartaa aalad wax ka beddesho si loo hagaajiyo annaga wax soo saar ama si fudud noogu oggolow inaan yareyno culeyska jirka ee la xiriira qorista. Intaa waxaa sii dheer, waxay u noqon kartaa app xulafo iyo dhammaystiran waxa leh Shell Scripting ma ahayn wax la taaban karo ama suurtogal ah in si otomaatig ah loo sameeyo.
Waxaan rajeyneynaa in daabicadani ay faa iido weyn u yeelan doonto dhamaanteed «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo gacan weyn ka geysatey hagaajinta, koritaanka iyo baahinta nidaamka deegaanka ee codsiyada la heli karo «GNU/Linux». Ha joojin inaad dadka kale la wadaagto, websaydhka aad jeceshahay, kanaalka, kooxaha ama bulshooyinka shabakadaha bulshada ama nidaamyada farriimaha. Ugu dambeyntiina, booqo boggayaga bogga at «Laga soo bilaabo Linux» si aad u sahamiso warar dheeraad ah, uguna biirto kanaalkayaga rasmiga ah ee Telegram ka FromLinux.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » AutoKey: Aalad qalab otomaatig ah oo waxtar u leh GNU / Linux
QEMU 6.1 waxay la timaadaa sirta qalabka, taageerada looxyo badan iyo in ka badan
ChimeraOS: Ku habboon GNU / Linux Distro ee ciyaaraha kombiyuutarka leh Steam